Panama Canal | Kufamba Nhau
Maria | | America, Chii chekuona
Zvekunetseka kukuru mukuvakwa kwayo, Panama Canal ibasa renyanzvi yepharaonic inobatanidza Gungwa reCaribbean nePacific Ocean. Kuvakwa kwaro muna 1881 kwakagadzirisa kuvandudzwa kwenyika kubva ipapo uye nekuve nhare yekutaurirana yakakosha kwazvo mukutengeserana kwepasirese kwakapihwa chinzvimbo chayo chakakosha.
Kuenda kuPanama uye kusashanyira mugero kwakafanana nekuenda kuFrance uye kusaona iyo Eiffel Tower. Pane nzira mbiri dzekushanyira iyo: kubva kune canal pachayo, kufamba kana kubva pamaonero ayo. Ini ndinokuudza zvese zvese.
1 Kubva pamaonero ekiyi
1.1 Miraflores kukiya
1.2 Pedro Miguel Anokiya
1.3 Bvisa Mvura Lock
2 Dzokera kuPanama Canal
Kubva pamaonero ekiyi
Iyo huru nzira yekuona iyo Panama Canal ndeye kubva pakuona kwenzvimbo dzayo kukiya. Kune matatu: Miraflores, Agua Clara naPedro Miguel.
Kushanya kwakanyanya kukurudzirwa uye kwakajairwa kuri kuMiraflores Visitor Center sezvo iriyo iri nyore kuwana uye yepedyo kubva kuPanama City. Iyo nzvimbo ine akati wandei zvinokwezva asi munhu wese anoda kukwira kune imwe yematanho matatu echitarisiko kubva kwaunogona kuona Panama Canal uye ngarava hombe kuburikidza nekiyi system.
Kuona magedhi akavhurika uye akavharwa uye mvura ichipukunyuka zvinoyevedza Nekudaro, hachisi chinhu chega chekuita paMiraflores Visitor Center sezvo paine chiono chinoratidza nhoroondo nekushanda kwePanama Canal, basa rayo mukutengeserana kwepasi rese uye kusiyanisa kwenzvimbo iyi. Uye zvakare, kune imba iyo inoratidzwa firimu (muchiSpanish neChirungu) nezve nhoroondo yemukoto inoratidzwa.
Pakazara, kushanya kwacho kunogona kutora kwemaawa maviri, asi iwe unogona kutarisa zvikepe zvichipfuura kusvikira Visitor Center yavhara kana kugara kuti udye mune imwe yevaresitorendi kana bhawa.
Paunenge uchishanyira Miraflores Visitor Center unofanirwa kufunga kuti mangwanani ngarava dzinoyambuka kubva kuPacific kuenda kuAtlantic uye masikati neimwe nzira yakatenderedza. Izvi zvinoreva kuti masikati ngarava hadzi pfuure uye hapana chinoitika mukiyi, saka unogona kutora nguva yekuona firimu rakanyorwa kana kushanyira dzimba dzekuratidzira.
Pedro Miguel Anokiya
Makiromita mashanu kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweMiraflores makiyi ndiwo makiyi ePedro Miguel. Sezvo vasina zvivakwa zvemuenzi kuti muenzi aone mabhoti achipfuura nepamagedhi hapana mutengo. Inogona kuonekwa kubva kuseri kweruzhowa pamwero wegungwa uye sezvo paine mabhenji nevatengesi vemumigwagwa, vanhu vazhinji vanotora mukana wekugara nekutandara vachiona ngarava hombe dzichipfuura.
Bvisa Mvura Lock
Kunze kwePanama City ndiko kukiya uye iyo Agua Clara Visitor Center, kunyanya kuchamhembe kweGatun Lake padyo neguta rePanamani reColón, kweawa imwe kubva kuPanama City.
Muna 2017, Agua Clara makiyi akavhurwa uye ari chikamu chekuwedzera kweiyo canal, chinangwa chayo chiri chekutendera kunyange hombe ngarava kupfuura idzo dzinofamba nenzira yekutanga kuti ipfuure. Pamugero wese wakawedzerwa, iwo chete ndiwo makiyi anogona kushanyirwa. Agua Clara anokiya ndiyo nzvimbo yakanakisa yekuona Panama Canal kana iwe ukasvika munyika uchikwira kuenda kuchiteshi cheColón kana kana uchifarira kushanyira nzvimbo iyoyo yePanama.
Dzokera kuPanama Canal
Kunze kwemaonero pane imwe nzira yekuziva nayo Panama Canal: kuifambisa muzvikepe zvakagadzirirwa kushanya. Icho chiitiko chinoshamisa, sekuziva iri rinoyevedza basa reinjiniya kubva mukati. Kune makambani akasiyana anoita chiitiko ichi uye vamwe vanotopa kudya kwemangwanani uye masikati muchikepe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » America » Panama Canal